ဖမ်းဝရမ်းထုတ် ခံထား ရတာကြောင် ရှေ့ထွက်မရပေမယ့် လည်း နောက်ကွယ် ကနေ သူလုပ်နိုင်တာ လေးတွေ ကို ကြိုးစား လုပ်ပေးနေရှာ တဲ့ ခင်ပွန်း ရဲ့ အကြောင်း ကို ပြောပြလာ တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု – GaMone Media
Homepage / Celebrity / ဖမ်းဝရမ်းထုတ် ခံထား ရတာကြောင် ရှေ့ထွက်မရပေမယ့် လည်း နောက်ကွယ် ကနေ သူလုပ်နိုင်တာ လေးတွေ ကို ကြိုးစား လုပ်ပေးနေရှာ တဲ့ ခင်ပွန်း ရဲ့ အကြောင်း ကို ပြောပြလာ တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
ဖမ်းဝရမ်းထုတ် ခံထား ရတာကြောင် ရှေ့ထွက်မရပေမယ့် လည်း နောက်ကွယ် ကနေ သူလုပ်နိုင်တာ လေးတွေ ကို ကြိုးစား လုပ်ပေးနေရှာ တဲ့ ခင်ပွန်း ရဲ့ အကြောင်း ကို ပြောပြလာ တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
By Ga MonePosted on February 25, 2021 February 25, 2021
သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ ဒါရိုက်တာဏကြီးနဲ့ ထိမ်းမြားလက်ထပ်ပြီး နှစ်ကိုယ်တူဘဝလေး တစ်ခုကို တည်ဆောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဏကြီးနဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုတို့ ဇနီးမောင်နှံက အရမ်းလိုက်ဖက်ပြီး ရှေ့သွားနောက်လိုက်ညီ တဲ့ စုံတွဲလေး ဖြစ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေကပါ အားကျနေရတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုလိုအချိန်မှာလည်း ဏကြီးနဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုတို့နှစ်ယောက်လုံးက လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ တက် တက်ကြွကြွပါဝင်သလို ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် တတ်နိုင် သလောက် ကြိုးစားပေးနေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ပိုင်ဖြိုးသုတို့ဇနီးမောင်နှံကတော့ ဖေဖော်ဝါရီလ အစပိုင်းကတည်းက လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး လူထုနဲ့ အတူ ရဲရဲဝင့်ဝင့်ရပ်တည်ပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်တစ်ဆင့် ပြည်သူတွေ စိတ်ဓာတ်မကျ ရအောင် အမြဲတမ်း အားပေးနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ လက်ရှိမှာတော့ ပိုင်ဖြိုးသုက နောက်ကွယ်ကနေ နိုင်ငံ့အကျိုးအတွက် သူလုပ်နိုင်တာလေးတွေ လုပ် ပြီး ကြိုးစားပေးနေတဲ့ ခင်ပွန်း ဖြစ်သူဏကြီးရဲ့ အကြောင်းလေးတွေကို ပြောပြထားတာ ဖြစ် ပါတယ် ။ ပိုင်ဖြိုးသုက “Day-1 ကစလို့ သူလုပ်စရာရှိတာလေးပဲ တစိုက်မတ်မတ်လုပ်တဲ့သူကြီး…သူ့ကိုဝ ရမ်း ထုတ်တာတောင် ဘာမှ စိတ်တိုခြင်း စိုးရိမ်ခြင်းမပြ ကိုယ်ပိုင် ခံစားချက်တစ်ခုမှမရှိသလို
” အေးလေ….ရှေ့ထွက်လုပ်လို့မရလည်း နောက်ကွယ်က လုပ်လို့ရတာတွေ လုပ်မှာပေါ့” လို့ တစ် ခွန်းတည်းပြောရှာတဲ့ ကျွန်မရဲ့ရေခဲတုံးကြီး…. ဒီနေ့တော့ တစ်ခွန်းပြောရှာတယ်…”ကျွန်တော် ရုပ်ရှင် ရိုက်ကွင်းတွေတော့ လွမ်းသား….” တဲ့ တ စ် သက်လုံးရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ကလွဲ ဘာမှ စိတ်မဝင်စားခဲ့တဲ့ ကျွန်မရေခဲတုံးကြီး အခုတော့ မတရား တာ ကို လက်ပိုက်ကြည့်မနေနိုင်လို့ အားလုံးနဲ့အတူ နိုင်တဲ့ဝန် ဝင်ထမ်းရင်း သူ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်း တွေကို သတိရနေရှာတယ် ” လို့ရေးသားကာ ချစ်ခင်ပွန်းဦးဏကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းသမီးေခ်ာေလး ပိုင္ၿဖိဳးသုကေတာ့ ဒါ႐ိုက္တာဏႀကီးနဲ႔ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ၿပီး ႏွစ္ကိုယ္တူဘဝေလး တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဏႀကီးနဲ႔ ပိုင္ၿဖိဳးသုတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံက အရမ္းလိုက္ဖက္ၿပီး ေရွ႕သြားေနာက္လိုက္ညီ တဲ့ စုံတြဲေလး ျဖစ္တာေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြကပါ အားက်ေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ အခုလိုအခ်ိန္မွာလည္း ဏႀကီးနဲ႔ ပိုင္ၿဖိဳးသုတို႔ႏွစ္ေယာက္လုံးက လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ တက္ တက္ႂကြႂကြပါဝင္သလို ကိုယ့္ႏိုင္ငံအတြက္ တတ္ႏိုင္ သေလာက္ ႀကိဳးစားေပးေနၾကတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္ ။ ပိုင္ၿဖိဳးသုတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံကေတာ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အစပိုင္းကတည္းက လမ္းေပၚထြက္ၿပီး လူထုနဲ႔ အတူ ရဲရဲဝင့္ဝင့္ရပ္တည္ျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္ ။
ဒါ့အျပင္ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာထက္တစ္ဆင့္ ျပည္သူေတြ စိတ္ဓာတ္မက် ရေအာင္ အၿမဲတမ္း အားေပးေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္ ။ လက္ရွိမွာေတာ့ ပိုင္ၿဖိဳးသုက ေနာက္ကြယ္ကေန ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးအတြက္ သူလုပ္ႏိုင္တာေလးေတြ လုပ္ ၿပီး ႀကိဳးစားေပးေနတဲ့ ခင္ပြန္း ျဖစ္သူဏႀကီးရဲ႕ အေၾကာင္းေလးေတြကို ေျပာျပထားတာ ျဖစ္ ပါတယ္ ။ ပိုင္ၿဖိဳးသုက “Day-1 ကစလို႔ သူလုပ္စရာရွိတာေလးပဲ တစိုက္မတ္မတ္လုပ္တဲ့သူႀကီး…သူ႔ကိုဝ ရမ္း ထုတ္တာေတာင္ ဘာမွ စိတ္တိုျခင္း စိုးရိမ္ျခင္းမျပ ကိုယ္ပိုင္ ခံစားခ်က္တစ္ခုမွမရွိသလို
” ေအးေလ….ေရွ႕ထြက္လုပ္လို႔မရလည္း ေနာက္ကြယ္က လုပ္လို႔ရတာေတြ လုပ္မွာေပါ့” လို႔ တစ္ ခြန္းတည္းေျပာရွာတဲ့ ကြၽန္မရဲ႕ေရခဲတုံးႀကီး…. ဒီေန႔ေတာ့ တစ္ခြန္းေျပာရွာတယ္…”ကြၽန္ေတာ္ ႐ုပ္ရွင္ ႐ိုက္ကြင္းေတြေတာ့ လြမ္းသား….” တဲ့ တ စ္ သက္လုံး႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ဖို႔ကလြဲ ဘာမွ စိတ္မဝင္စားခဲ့တဲ့ ကြၽန္မေရခဲတုံးႀကီး အခုေတာ့ မတရား တာ ကို လက္ပိုက္ၾကည့္မေနႏိုင္လို႔ အားလုံးနဲ႔အတူ ႏိုင္တဲ့ဝန္ ဝင္ထမ္းရင္း သူ႔႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကြင္း ေတြကို သတိရေနရွာတယ္ ” လို႔ေရးသားကာ ခ်စ္ခင္ပြန္းဦးဏႀကီးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျပာထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။
Previous post သံပုံးတီး တဲ့ သူများအား သေနတ်ပြ ခြိမ်းခြောက် သူ ကိုစစ် ကိုစစ် ဆိုတဲ့ အကောင့် ပိုင်ရှင် ကို ပြန် တုံ့ ပြန် ခဲ့တဲ့ မင်းမော်ကွန်း
Next post နံနက်စောစော မှာ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာ လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ နေအိမ်ရှေ့ကို သွားပြီး ပရိတ်ရွတ်၊မေတ္တာပို့နေတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်